Izindaba - Ungazisebenzisa kanjani ibhulashi lesisekelo ngaphandle kwezimpawu zebhulashi?
Ungayisebenzisa kanjani ibhulashi lesisekelo ngaphandle kwezimpawu zebhulashi?
1. Kungcono ukukhetha isisekelo samanzi.
Yize ibhulashi lesisekelo lisetshenziselwa ukuxubha isisekelo, akuyona yonke imidwebo yesisekelo engaxubha isisekelo esihle. Uma ufuna ukugwema amamaki webhulashi lesisekelo, khona-ke kungcono ukhethe isisekelo samanzi.
Ngoba isisekelo esiwuketshezi sibumbeka kalula, kulula ukusabalalisa ibhulashi ngokulinganayo ngebhulashi lesisekelo, futhi ngeke lishiye kalula amabhulashi ngemuva kokuthi linamathiselwe esikhunjeni, futhi isisekelo sizoba esifanayo, sibe mncane futhi sibushelelezi.
2. Yenza okunye ukugcinwa kwebhulashi lesisekelo.
Vula ibhulashi lesisekelo elisanda kuthengwa, bese uthela isisekelo samanzi esingasetshenziswanga kucezu lukathayela, cwilisa ibhulashi lesisekelo ngesisekelo soketshezi, qiniseka ukuthi amabhulashi ngamunye ambozwe ngesisekelo, bese usigoqa esikhwameni sepulasitiki noma ukugoqa ngepulasitiki Bopha ikhanda lebhulashi uligcine lisendaweni evaliwe imizuzu embalwa, bese ukhipha ibhulashi lesisekelo, hlambulula isisekelo ngqo noma usebenzise ithawula lephepha ukuxubha ikhanda lebhulashi ukusula ukuhlanza isisekelo, ukuze ibhulashi ikhanda lizoba lula futhi liqine. Amamaki webhulashi akulula kangako ukuvela.
3. Khipha u- “丨” amaningi ebusweni ngesisekelo.
Ungasebenzisi ibhulashi lesisekelo ngqo ukuthatha isisekelo samanzi bese usisebenzisa ebusweni bakho. Esikhundleni salokho, cindezela uhlamvu lwemali lwesisekelo entendeni yesandla sakho noma indawo yokuhlala (uma uzizwa womile, engeza ithonsi lokugcoba bese ulixuba ngokulinganayo), bese usebenzisa ibhulashi lesisekelo ukuthatha inani elincane uketshezi isisekelo Bese udweba amamaki amancane “丨” ebusweni, bese usebenzisa ibhulashi lesisekelo ukulishanela kancane uye emuva naphambili. Lokhu ngeke nje kugweme ukushiya amamaki webhulashi, kodwa futhi kuzokwenza umfaniswano webhulashi wesisekelo ukujiya.
4. Naka ukushuba kwebhulashi lesisekelo.
Kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi amabhulashi esisekelo enziwe kakhulu ngemicu yokwenziwa, ngakho-ke amabhulashi ekhanda lokuxubha angaba nzima. Kufanele ufunde amandla lapho uwasebenzisa. Ngokuvamile, kunconywa ukuthi uswayiphe ngamandla ayi-0, futhi isandla akumele sibe nzima kakhulu ukugwema ukuklwebheka. Ubukhulu besikhumba noma besisekelo abalingani, kepha amandla akufanele abe mancane kakhulu, okuzoholela kalula kumamaki webhulashi asalayo kubhulashi lesisekelo.
5. Yazi kahle indlela yokuxubha yezingxenye ezahlukahlukene.
Lapho uxubha izindawo ezinkulu ezinjengezihlathi, isilevu, noma isiphongo ngebhulashi lesisekelo, kungcono ukukhetha ibhulashi lesisekelo esiyisicaba futhi ugcine i-angle engama-30 degree nesikhumba. Lapho uxubha ikhala, indawo yeso noma izindebe, kufake esikhundleni saso okuncane. Ibhulashi lesisekelo le-flat / oblique lenzelwe ukuxubha indawo yamehlo nezindawo ezicashile zobuso, bese umisa ibhulashi uphinde ulibuyise ngobumnene futhi. Ngale ndlela, amamaki webhulashi akulula ukuvela kwezinye izingxenye ezicashile noma ezinemibimbi.
6. Yenza umsebenzi omuhle wokuhlanza.
Ngemuva kokuyisebenzisa, udinga ukusebenzisa i-professional remover remover ukuhlanza ibhulashi lesisekelo ukwenza lula ukusetshenziswa okulandelayo, futhi ngesikhathi esizayo lapho uyisebenzisa, ngeke kube khona amamaki okuxubha ngenxa yamakhanda webhulashi angalingani.
7. Emva kokuxubha isisekelo, fafaza amanzi bese ucindezela ubuso.
Ngemuva kokufaka isisekelo, sebenzisa amanzi okuthambisa ukumanzisa intende noma isiponji, bese ucindezela ngobumnene ukwakheka kwesisekelo futhi. Lokhu ngeke kugcine ngokuthambisa isikhumba esomile kuphela, kepha kuzosusa namamaki okuxubha abangelwa ibhulashi lesisekelo, kushiye i-makeup surface cleaner futhi ihlanzeke ngokwengeziwe. Kulinganiswe kahle.
Lawa amathiphu wokuthi ungalisebenzisa kanjani ibhulashi lesisekelo ngaphandle kwamamaki webhulashi. Uma uzwa ukuthi ukwakheka kwesisekelo akulingani nempuphu, ungahle uzame nomphumela webhulashi lesisekelo. Kulula ukuqala ngokuzijwayeza okwengeziwe.
Yenza amabhulashi, Ithuluzi Brushes Brushes, Ukugunda Izinwele, Setha i-Makeup Brushes, Ukushefa Setha, isethi yokwenza ibhulashi,